1 Tọgharia iPhone
Tọgharịa iPhone enweghị Apple ID
Nrụpụta Mmachibido Paswọdu
Tọgharịa iPhone Paswọdu
Tọgharịa iPhone All Ntọala
Tọgharịa Network Ntọala
Tọgharịa jailbroken iPhone
Tọgharịa oziolu Paswọdu
Tọgharịa iPhone Battery
Tọgharịa iPhone na iTunes / iCloud
2 Ike Tọgharia
Ike Tọgharia iPhone enweghị Paswọdu
Ike Tọgharia iPhone enweghị Computer
Ike Tọgharia iPhone enweghị iTunes
Olee otú Ike Tọgharia iPhone
Ike Tọgharia iPhone vs Soft Tọgharia
3 Factory Tọgharia
Factory Tọgharia iPhone Atụmatụ
Factory Tọgharia iPhone enweghị iTunes
Factory Tọgharia iPhone enweghị Paswọdu
4 Iweghachite ọnọdụ
Banyere Iweghachite ọnọdụ
Get iPhone si Iweghachite ọnọdụ
WepuÚ iPhone na mgbake mode Loop
Weghachi iPhone na mgbake mode
Idozi iPhone na mgbake mode
Back elu iPhone na mgbake mode
Naghachi Data si iPhone na mgbake mode
iPod Nọgidesiri na mgbake mode
iPad Nọgidesiri na mgbake mode
Banyere iPhone DFU Mode
iPhone na DFU Mode
Tinye DFU Mode na gị iPhone
WepuÚ DFU Mode na gị iPhone
Naghachi iPhone Nọgidesiri na DFU Mode
Ngwaọrụ n'ihi iPhone ịbanye DFU Mode
Ọtụtụ ndị na-amaghị ihe iPhone ike nrụpụta bụ na ihe iPhone adụ nrụpụta. Echegbula onwe gị banyere! Were a lee anya na chaatị n'okpuru, mgbe ahụ, ị ​​ga-ịghọta n'ụzọ zuru ezu ọdịiche dị n'etiti ndị iPhone ike tọgharịa na iPhone Soft tọgharịa. Soft nrụpụta iPhone adịghị ihichapu ọ bụla data na gị iPhone, ma ike tọgharịa iPhone ga. Na nke a, tupu eme a ike nrụpụta, ị kwesịrị ị na-eso checklist mara ihe unu kwesịrị ime mbụ. Isiokwu a na-ekpuchi 3 akụkụ. Lelee ọmụma ị nwere mmasị na:
Part1: iPhone Ike Tọgharia vs. iPhone Soft Tọgharia
Part 2: iPhone Ike Tọgharia Ultimate Checklist
Part 3. Olee otú ime a Ike Tọgharia maka iPhone
Soft Tọgharia iPhone
Definition Wepụ ihe niile na ihe iPhone (Tọgharia ya ụlọ ọrụ ntọala) Gbanyụọ iPhone na Malitegharịa ekwentị ya
Mgbe Jiri • iPhone oria na virus;
• iPhone bụ enweghị ike reboot
• mgbe ere ya onye ọzọ;
• Serious slowdown mgbe na-arụ ọrụ iPhone
• Oyi kpọnwụrụ / ekpochi iPhone ma ọ bụ malfunctioning • iPhone ịrụ a peculiar omume
• Mkpa idozi ụfọdụ obere nsogbu na iPhone
Olee otú ime ya site na iTunes ma ọ bụ ịrụ ya na iPhone ozugbo Jide Home button na Ụra / Tetanụ button n'out oge 20 sekọnd ruo mgbe ị na-ahụ Apple logo na gị iPhone. Hapụ ma buttons.
Results nke na-eme ya Ihichapu niile data on iPhone (zere data ọnwụ, na-agụ checklist) Ọ dịghị data ọnwụ
Cheta na: Ike nrụpụta nhọrọ nwere ga-atụle nanị mgbe eme a adụ nrụpụta site ibidogharịa gị iPhone na ego maka ihe ọ bụla mgbanwe omume nke gị iPhone. Ọ dị oké mkpa ego maka ihe ọ bụla ngwaike ọdịda dị ka components, batrị, SIM ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa tupu ihe a ike nrụpụta nhọrọ. Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na a adụ nrụpụta on iPhone nwere ike idozi nsogbu ndị ị na-eche ihu, mgbe ahụ, ị na-adịghị na-echigharịkwuru a ike nrụpụta on iPhone. A ike nrụpụta ga weghachi iPhone si ntọala ya mbụ nhazi site ekpocha niile nke atọ ọzọ ngwa, data, onye ọrụ ntọala, zọpụta okwuntughe na ọrụ akaụntụ. Usoro ga-hichapụ ihe niile echekwara data na iPhone.
Ọ bụ oké mkpa iji na-agụ dum checklist tupu ike tọgharịa gị iPhone dị ka usoro ọcha elu gị niile data, onye ọrụ ntọala, ngwa na ihe ọ bụla na-echekwara na ngwaọrụ kpamkpam na ụfọdụ data-apụghị gbakee. Site n'ịgụ checklist, ị ga-enwe ike na-niile dị mkpa ndabere nke dị mkpa echekwara data, ebudatara ngwa, na onye ọrụ ntọala ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na ọtụtụ ndị ọzọ tupu ike tọgharịa gị iPhone. Iji mee ka ike nrụpụta gị iPhone ngwa ngwa na enweghi mgbu ọ na-achọ na-amụ anya atụmatụ. Ndị na-esonụ checklist nwere ga-agbaso tupu ịmalite kwụsịrị ike nrụpụta:
1. Mepụta ndabere nke niile dị mkpa faịlụ gị iPhone: nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị paramount checklists nke i ga-eso tupu ike tọgharịa gị iPhone. Ịmepụta ndabere maka ndị niile dị mkpa ozi dị ka SMS, kọntaktị, akwụkwọ ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ntọala, photos, videos, music na ndị ọzọ na data ịchekwa na gị iPhone.
2. Mepụta ndabere nke onye ọrụ na ntọala gị na iPhone: na iji ntọala, zọpụta na tọgharịa nhọrọ na-iPhone, i nwere ike ịzọpụta Wi-Fi okwuntughe, nchọgharị ibe edokọbara na ihe ọ bụla ichekwa ego na bank ngwa arụnyere na iPhone.
3. Kwadebe a ndepụta nke ngwa eji ugboro ugboro: tupu ike tọgharịa iPhone, ọ bụ ihe amamihe anya na-akwadebe a ndepụta nke ga-enwe na ugboro ugboro ji ngwa.
4. Tulee maka ngwa ikikere ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla: ọ bụ ihe amamihe na-ele anya na-ewere a dee nke ọ bụla atọ ọzọ ngwa arụnyere na gị iPhone nwere ikikere ma ọ bụ Oghere Usoro nọmba ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla. Nke a dị oké mkpa iji zere ịtụ ọzọ mgbe wụnye ndị dị mkpa ngwa.
5. ego maka snippets na plugins: ọ dị oké mkpa ka ịmepụta ndabere nke dị mkpa plugins, snippets na wijetị nke ọkacha mmasị gị ngwa awụnyere na iPhone.
6. Wepu iTunes ikike: ọ dị oké mkpa iji wepụ iTunes ikike tupu ike nrụpụta gị iPhone nwere nsogbu free reauthorization on a ọhụrụ factory mwube iPhone na iji Apple ID.
Cheta na: The ike nrụpụta nhọrọ nwere na-eji naanị na ọnọdụ nke nchọpụta nsogbu gị iPhone maka njehie ma ọ bụ mgbe ichebe ndị onwe ozi tupu a ire ere azụmahịa. Mgbe-eso checklist maka ike nrụpụta nke iPhone, i nwere ike iji ihe ọ bụla nke ụzọ abụọ mezue ike nrụpụta. The nzọụkwụ-site-nzọụkwụ usoro e depụtara n'okpuru ebe ga ịdị iche iche a obere dabeere na iOS version na gị iPhone, Otú ọ dị, sara usoro anọgide n'otu.
Ike Ezumike iPhone na iTunes
Nzọụkwụ 1. ego maka ọhụrụ version nke iTunes tupu ịmalite ike nrụpụta usoro. Ọ dị oké mkpa iji hụ na ọhụrụ mmelite e emelitere iji hụ na a nsogbu free usoro. Nke a nwere ike-enyocha na site na iji mail iTunes toolbar na dobe-ala-menu egosi "ego maka mmelite".
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa. Iji ike ike, ọ dị oké mkpa ijikọ iPhone na kọmputa na iji eriri. Mgbe ejikọta ndị iPhone, na-eji "Back Up Ugbu a," nhọrọ. Nke a ga-enyere na-a nkwado ndabere nke nile dị oké mkpa akwụkwọ, foto, ngwa ọdịnala, kọntaktị, onye ọrụ ntọala na ọtụtụ ndị ọzọ na kọmputa.
Nzọụkwụ 3. Mgbe-emecha ndabere nke nile dị oké mkpa ọmụma, ị pụrụ ịmalite na ike nrụpụta usoro. Na-eji "Weghachi iPhone" nhọrọ ke iTunes usoro nwere ike malitere. Mgbe ịpị nhọrọ, usoro kpaliri a ozi iji gosi na mkpebi. Ozugbo ị na akwado mkpebi site na ịpị "Kwere" nhọrọ, software ndị dị mkpa maka ike nrụpụta ga-amalite ibudata.
Ike Tọgharia iPhone on iPhone Kpọmkwem
Nzọụkwụ 1. enweta "General" nhọrọ site na ịme ọpịpị na ntọala icon dị na Ihuenyo gị iPhone. Ozugbo ị pịa na "General" nhọrọ, anya maka "Tọgharia" nhọrọ na-amalite nrụpụta usoro.
Nzọụkwụ 2. Mgbe ịpị na "Tọgharia" button, anya n'ihi na "Ihichapu ọdịnaya niile na ntọala" nhọrọ mere anya site a mmapụta elu page. Nke a ga-eme ka "ihichapu iPhone" nhọrọ anya na ihuenyo, nke mgbe pịrị ga-akpali n'ihi na nkwenye nke mkpebi gị.
Nzọụkwụ 3. Kwenye ike nrụpụta gị iPhone ụlọ ọrụ ntọala. Usoro ga-nnọọ a nkeji ole na ole. A dechara usoro pụtara na onye ọ bụla nke gara aga data echekwara, ngwa arụnyere ma ọ bụ onye ọrụ ntọala dị na iPhone.
Top 3 iPhone Explorer égwu
A Complete List iji tọgharịa iPhone Paswọdu
Olee otú Tọgharia Network Ntọala On iPhone na Atụmatụ & Aghụghọ
Ndenye Idozi 'Ọ dịghị Enough Space on iPhone iji weghachi ndabere'
OTÚ NWETA Wi-FIPASSWORD
Olee otú mmekọrịta Thunderbird na iPhone
Dr.Fone Maka iPhone: Naghachi ehichapụ Data si iPhone
> Resource> iPhone> Mgbe Ike Tọgharia iPhone tupu Ịgụ Ultimate Checklist